Worthwhile freshman activities at Chula
Positive habits that you admire in other people
Examples of annoying habits people have on the Skytrain
သရက်သီးတွေ ဝင်းပြီး မှည့်နေတဲ့ ရာသီမှာ ခံတွင်းမြိန်စေမယ့် အသီးတစ်မျိုးကတော့ သရက်သီးမှည့်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အပင်တွေမှာလည်း ဝင်းရောင်သန်းနေတဲ့ သရက်သီးတွေကို မြင်နေရသလို ဈေးတွေထဲမှာလည်း လှိုင်လှိုင်ပေါနေတဲ့ သရက်သီးမှည့်တွေကို တွေ့နေရပါပြီ။ သရက်ပင်ကို အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ ပေါက်ရောက်တာများပြီးအမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နေရာအနှံ့မှာ ပေါက်ရောက်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေကတော့ သရက်သီးမှည့်ကို ထမင်းနဲ့ ရောစားပြီး နွေရာသီမှာ ခံတွင်းမြိန်အောင် စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ရာသီစာ သရက်သီးမှည့်တွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေပါတယ်။ သရက်သီးမှာ ကိုလက်စထရော နည်းနည်း၊ ဆိုဒီယမ်၊ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင် အုပ်စုတွေ ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ B6 တို့ […]
Posted in ဆေးပညာ ဗဟုသုတ
Piedmont, or mountain, glaciers are found in many parts of the world. In North America they are distributed along the mountain ranges of the Pacific Coast from central California northward. They abound in the Andes range in South America and are familiar and greatly admired spectacles in the Alps, […]
Posted in ပြည်တွင်းသတင်းLeaveaComment on Favorite childhood toys
When mice are kept at high population densities, their behaviour changes inanumber of ways. Aggressive activity within populations of mice rises as density increases. Cannibalism of young also goes up, and so does aberrant sexual activity. Communal nesting, frequent in natural mouse populations, increases abnormally. In one […]
Posted in နည်းပညာ သတင်းLeaveaComment on Worthwhile freshman activities at Chula
Scientists’ research has revealed that viruses are by far the most abundant life forms on Earth. There areamillion times more viruses on the planet than stars in the universe. Viruses also harbor the majority of genetic diversity on Earth. Scientists are finding evidence of viruses asa[…]
Posted in ဆေးပညာ ဗဟုသုတLeaveaComment on Positive habits that you admire in other people
Piedmont, or mountain, glaciers are found in many parts of the world. In North America they are distributed along the mountain ranges of the Pacific Coast from central California northward. They abound in the Andes range in South America and are familiar and greatly admired spectacles in the Alps, the […]
Posted in ဆယ်လီသတင်းLeaveaComment on Examples of annoying habits people have on the Skytrain